Oro Agri Europe - Science Kwadoro site na Nature
Otu ụlọ ọrụ Rovensa
Bughari menu menu
Ihe na-egbu nje
Fatịlaịza / Nri
Ihe na-edozi mmiri
Ntuziaka Companylọ Ọrụ 2021
Ntuzi ihe ọkụkụ echekwara
Nduzi Bara Uru
Broshuọ OROBAC ™ 100 FAQ
OROMAT K K26
Ntuziaka Nsonaazụ Ọnwụnwa Nduku
Ntuziaka Ngwa Mkpụrụ Pome
Ntuziaka Nsonaazụ Mkpụrụ vaịn
OROBOOST® ihe enyemaka
Ihe R&D / Projetos de I&D
OSB-OXIDE Nkọwa na Biocide
Nyocha Cleistothecia 2019
Nyocha Cleistothecia 2018
Akụkọ / Pịa
AJQR TR TRANSFORMER®
WETCIT ™ Ajụjụ
OROMATE K26 ™ Ajụjụ
Isi data ule
Ebumnuche anyị bụ iweta nchedo ihe ọkụkụ na gburugburu ebe obibi kachasị mma yana azịza ahịa na ahịa na ahịa.
EU nyere nkwado ego:
Na-azụ Throughwa Nkà Ọhụrụ
Anyị na-azụlite ngwaahịa ndị dị mma maka onye ọrụ na gburugburu ebe obibi ma nye ndị ahịa anyị azịza dị mma, mana nke fọdụrụ.
Lee ngwaahịa anyị
Uniquedị omume na usoro ngwa ngwa pụrụ iche a na-etinye ngwaahịa anyị dịka ụkpụrụ nduzi kachasị dị ugbu a ka ọ rụọ ọrụ nke ọma, mana nchekwa maka gburugburu ebe obibi. Matakwu, gaa na ngalaba Ajụjụ anyị.
Hụ ngalaba anyị na-ajụkarị
Nyochaa akụrụngwa na ngwa ọdịda nke usoro nwere mmanụ dị mkpa sitere na citrus sinensis iji belata mmepe erysiphe necator cleisthotecia
Hụ Ọrụ Anyị
Site na R & D na ndị ọrụ nkwado ọrụ aka na Europe na gburugburu ụwa anyị na-achọ ngwaahịa ọhụrụ mgbe niile nwere ike ịkwalite mkpụrụ ma kwado ahụike ihe ọkụkụ.
Continuos R & D ego
Anyị bụ ndị na-eweta mbido nke nchekwa, gburugburu ebe obibi, nchedo ihe ọkụkụ na ngwọta mmelite mkpụrụ maka ahịa ụwa na ahịa ndị ahịa.
Oro Agri International Ltd (n'okpuru akara anyị ORO AGRI) na-emepụta ma na-arụpụta ihe eji emepụta nke ọma maka ọrụ ugbo, ụlọ na ngwa ụlọ ọrụ n'ụwa niile. Anyị ọkachamara na ngwaahịa ndị dị mma maka onye ọrụ na gburugburu ebe obibi nke ahụ ga-enyekwa ndị ahịa anyị ihe ngwọta dị mma, ma ọ nweghị nnweta.
Site na Nature®
Soro ozi kachasị ọhụrụ banyere ụlọ ọrụ anyị na ngwaahịa ndị dị mma maka onye ọrụ na gburugburu ebe obibi ma nye ndị ahịa anyị ihe ngwọta dị mma, ma ọ bụ ihe fọdụrụnụ.
Anyị ọkachamara na ngwaahịa ndị dị mma maka onye ọrụ na gburugburu ebe obibi nke ahụ ga-enyekwa ndị ahịa anyị ihe ngwọta dị mma, mana ihe fọdụrụ. Ngwaahịa gunyere ndị enyemaka, pesticides, ala conditioners or foliar faili ntanetịime.
Ndị ọkachamara anyị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ọhịa na ndị na-eto eto obodo ma na-enyere ndị na-ekesa ya aka inwe ọzụzụ iji kụziere ndị ọrụ ugbo banyere ojiji nke ORO AGRI ụdị ngwaahịa.
PREV-AM® niile na-egbu ahụhụ, fungicide na acaricide
OROGANIC ™ Okwu Mmalite
TRANSFORMER® Onye na-edozi Ala
Uru Ahụhụ na Mites Ntuziaka
ORO AGRI Ndị Mmekọ
Itinye aka na mmekorita ya bu ihe di nkpa iji mee ka anyi gbasaa usoro anyi nyere ndi n’eto eto n’uwa nile. Ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-enye ọtụtụ ọrụ dị iche iche na-enyere anyị aka ịnọgide na-eweta azịza ndị ọhụrụ na ahịa. Ọrụ ndị a gụnyere asambodo, ọzụzụ, nyocha, na mgbasa ozi. Anyị nwekwara ndị mmekọ anyị na ha na-arụkọ ọrụ na ime obodo na mmepe obodo, na-arụ ọrụ iji mee ka mmadụ niile nweta ihe ọmụma na sayensị. Anyị na-agbasawanye netwọkụ anyị maka imekọ ihe ọnụ ma na-anabata onye ọ bụla nke na-enyere anyị aka hụ na ndị ọrụ ugbo na-eji ngwaahịa anyị eme ihe n'ụzọ ziri ezi na nke ọma, na-echebe ihe ọkụkụ ha na gburugburu ebe obibi.
Onye na - eweta nchekwa, nchekwa gburugburu ebe obibi, nchedo ihe ọkụkụ yana azịza nke ọma maka ahịa ahịa na ahịa ndị ahịa ụwa.
Oro Agri International Ltd (n'okpuru akara anyị ORO AGRI) na-emepụta ma na-arụpụta ihe eji emepụta nke ọma maka ọrụ ugbo, ụlọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ụwa niile. Anyị ọkachamara na ngwaahịa ndị dị mma maka onye ọrụ na gburugburu ebe obibi nke ahụ ga-enyekwa ndị ahịa anyị ihe ngwọta dị mma, mana ihe fọdụrụ.
Ma, uzo ahia anyi na ahia anyi abawanyewo ma di ugbu a na mba iri asatọ na asaa na mba ụwa.
Otù ORO AGRI na-arụpụta na kọntinent anọ dị iche iche na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na USA, Brazil, South Africa na ugbu a Portugal.
ORO AGRI Group nwere teknụzụ dị iche iche. Nnyocha anyị na-elekwasị anya mgbe niile ịchọta ngwa ọhụrụ maka teknụzụ anyị.
Họrọ nkesa karịrị mba 85 n’uwa niile. Ihe kariri ndi ahia 2,000 + ma obu ndi na ere ahia na ere ahia ORO AGRI n’uwa niile. 180 ndị ọrụ dị na ihe karịrị mba 23.
Ngalaba Patented Technology
R&D na teknụzụ na-akwado ndị otu nkwado na South Africa, Brazil, United States na Europe. Labolọ akwụkwọ na-emepe emepe na mmepe na Portugal, Brazil, South Africa, na United States.
Anyị na-azụlite ma na-arụpụta ngwaahịa patented, anyị na-arụkwa ọrụ nke ọma na ngwaahịa ndị nwere nchekwa maka onye ọrụ na gburugburu ebe obibi ma nye ndị ahịa anyị azịza dị mma, mana nke fọdụrụnụ.
Sayensị Kwadoro Site Na Nature®
Obodo Estrada 533, Estrada do Lau
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Oro Agri International BV
Nzukọ BioControl Global 2021
Ewebata OROBAC ™ 100
Ndebanye aha / ikike ọhụrụ
OROMATE K26® nyere ikike na France site n'aka ANSES
Copyright 2021 © ORO AGRI Europe. Ikike niile echekwabara.
Anyị na-eji kuki iji nye gị ahụmịhe nchọgharị ka mma, nyochaa okporo ụzọ saịtị, ma hazie ọdịnaya. Gụọ maka otu anyị si eji kuki na otu ị nwere ike isi chịkwaa ha site na ịpị "Mmasị Nzuzo." Ọ bụrụ n'ịnọgide na-eji saịtị a, ị kwenyere n'iji kuki.
Nchịkọta na Kuki nhazi
Daalụ maka ịga na weebụsaịtị ORO AGRI wee nyochaa amụma nzuzo anyị. Amụma nzuzo anyị dị mfe: anyị anaghị anakọta ozi gbasara gị gbasara onwe gị mgbe ị gara na weebụsaịtị anyị karịa adreesị IP nke ị na-abanye iji wee mee ka ị gaa mba saịtị nke ngwaahịa anyị. Emere nke a ka ọ dịrị gị mma. Lee ka anyị si ejikwa ozi banyere ozi gị na weebụsaịtị anyị: Ozi anakọtara ma chekwaa na akpaghị aka sava weebụ ORO AGRI anaghị anakọta ma ọ bụ chekwaa ozi ndabara ọ bụla maka arịrịọ ọ bụla http natara. Anyị na-amata adreesị IP gị ka ị gbanyeghachi onye ọrụ nke otu ikike na ibe weebụ kwesịrị ekwesị. E-mail E-mail nke e nyefere na ORO AGRI na-anata na igbe igbe dị na igbe igbe jikọtara na info@oroagri.com ma ọ bụ legal@oroagri.com mana anaghị echekwa ya na sava weebụ ma ọlị. Jiri kuki na-adịgide adịgide na teknụzụ nsuso Anyị anaghị eji kuki na-adịgide adịgide ma ọ bụ teknụzụ nsuso na-aga n'ihu, dị ka ndị a na-eji edozi oge maka ndị ọbịa na-alọghachite, na weebụsaịtị anyị. Mgbe emechara oge gị, kuki ahụ na-akwụsị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nchegbu ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị na adreesị ozi-e legal@oroagri.com
Kuki ndị a dị oke mkpa iji nye gị ọrụ dị site na weebụsaịtị anyị na iji ụfọdụ atụmatụ ya, dị ka ịnweta ebe echedoro. Maka kuki ndị a dị oke mkpa iji wepụta weebụsaịtị, ị gaghị ajụ ha na-enweghị mmetụta otu esi arụ ọrụ weebụsaịtị anyị. Nwere ike igbochi ma ọ bụ hichapụ ha site na ịgbanwe ntọala ihe nchọgharị gị, dịka akọwara n'okpuru isiokwu "Olee otu m ga-esi jikwaa kuki?" na Nkwupụta kuki.
gdpr [allow_cookies], gdpr [nkwenye_types], wc_cart_hash_ #, wc_fragments_ #
Kuki ndị a na-anakọta ozi ejiri ma ọ bụ na mkpokọta nchịkọta iji nyere anyị aka ịghọta etu esi eji weebụsaịtị anyị ma ọ bụ iji nyere anyị aka ịhazi weebụsaịtị anyị maka gị iji bulie ahụmịhe gị.
_ga, _gat, _gidenụ, chịkọta
A na-eji kuki a iji zipu data na nchịkọta Google banyere ngwaọrụ onye ọbịa na omume ya. Ọ na-eso onye ọbịa ahụ n'ofe ngwaọrụ na ọwa ahịa. A na-eji kuki a iji mee ka ozi mgbasa ozi baara gị na ọdịmma gị uru. Ọ na-arụ ọrụ dịka igbochi otu mgbasa ozi ahụ ka ọ ghara ịpụta ọzọ, na-ahụ na egosiputara mgbasa ozi nke ọma, na n'ọnọdụ ụfọdụ na-ahọpụta mgbasa ozi dabere na ọdịmma gị.
r / nakọta